Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Degmada Buulo-burte. – Bogga Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Degmada Buulo-burte.
July 17, 2017 5:31 am Views: 145
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen difaacyada ciidamada dowlada Ridada Jabuuti ay ka sameysteen degmada Buulo burte ee gobalka Hiiraan.
Dagaalkan culus waxa uu sigaar ah kaga dhacay saldhig ciidamada Jabuuti ay ka sameysteen halka looga baxa degmada Buulo burte marka loo aadayo deegaanada dhanka Qoraxsin ama Galbeed kaga beegan degmadaasi.
Dagaalka waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,waxeyna dadka degmada xaqiijiyeen in dagaalkii xalay uu ka mid noqonayo dagaaladii ugu cuslaay ee mudooyinkii dambe ka dhacay degmadaasi.
Warar hoose ayaa sheegaya iney jirto khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo ciidamada Jabuuti lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Askarta Jabuuti ayaa dagaalka kadib tiro madaafiic ah ku garaacay howdka dhanka galbeed kaga beegan Buulo burte taasi oo muujineyso iney jirto khasaara Jabuutiyaanka lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Saacadihii lasoo dhaafay ayeey aheed markii ciidamada Shabaabul Mujaahidiin degmada Qoryooley iyo duleedka magaalada Kismaayo ay ka fuliyeen weeraro khasaara lagu gaarsiiyay askar isugu jirta American,Kufaarta Afrikaanta iyo maleeshiyaatka dabo dhilifyada u ah shisheeyaha soo duulay.